मुलुकभन्दा ठुलो संविधान होइन, सेनाहरुका लागि मुलुक प्यारो की ? सांसदहरू र नेताहरू प्यारो ?? | Namuna Nepal
मुलुकभन्दा ठुलो संविधान होइन, सेनाहरुका लागि मुलुक प्यारो की ? सांसदहरू र नेताहरू प्यारो ??
राकेश कुमार शर्मा |
मुलुक भन्दा ठुलो संविधान होइन संविधान फेरि पनि बन्न सक्छ । सेनाहरुका लागी मुलुक प्यारो की ? राजनीतिक दलहरूका भ्रष्ट, हत्यारा र मुलुकलाई ध्वस्त गर्ने सांसदहरू र नेताहरू प्यारो ?
माओवादीहरुले पनि द्वन्द कालमा नेपाली सेनाहरुलाई सिध्याउन खोजेको नै हो । हालमा आएर पनि मन्त्री र नेताहरूले कहिले सेनाहरुको संख्या कम गर्ने भन्छन ? कहिले सेनाहरुको रेन्जर गण (बटालियन) हटाउनु पर्ने वा खारेज गर्ने भन्छन आखिरमा गर्न खोजेको के ?
जुनसुकै मुलुकमा पनि मुलुकको हित र रक्षाका लागी सेनाहरु महत्त्वपूर्ण अंग र शक्तिशाली रूपमा मानिन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरुले विभिन्न किसिम बाट
सेनाहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भइ रहेको छ।
स- साना कुराहरूलाई पनि अब सेनाहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएमा विश्वमा नै नेपालको सेना बदनाम हुने स्थिति आउन सक्छ ?
सेनाहरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा मुलुक भन्दा ठूलो संविधान होइन । संविधान फेरि पनि बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरू र नेताहरूबाट मुलुकमा के सहि भइ रहेकोे के गल्ती भइ रहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । तपाईंहरु आफै भन्नुस् के प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरू संविधान बमोजिम चलेका छन ? हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको सहि सदुपयोग भएको छ र ? नागरिकहरुले सहि कामहरू गर्नका लागी प्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचनमा चुनेर पठाएका हुन। जनताहरु बाट निर्वाचित हुँ भन्दैमा दुरुपयोग र मनपरि गर्न पाइन्छ ? कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा दुरुपयोग गर्ने हरुले अरु समयमा के बाँकी राख्लान ?
कोरोना भाइरसको महामारीमा लकडाउनको समयमा अर्बौंको भ्रष्टाचार, सत्ता लिप्सा र सत्ता परिवर्तनको खेल के यो सहि हो ? हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज । यसकारण मुलुकको हित भन्दा ठुलो संविधान होइन यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।
बाहिरी मुलुकहरुमा सेनाहरुको लागि मुलुकको स्वाधीनता र अस्मिता भन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन ? सेनालाई राजनीतिक संग सरोकार नै हँदैन । तर नेपालमा सेनाहरु पनि राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता र सदस्य भए जस्तो छ नी ?
कोरोना भाइरसको महामारीमा समेत स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी र स्वास्थ्य सामग्रीको चोरी गर्न नछाड्ने हरुले अरु समयमा मुलुक संग गद्दार गर्न के बाँकी राख्लान ?
बाहिरी मुलुकमा सेनाहरु मुलुकको स्वाधीनता प्रति मात्र जिम्मेवार हुन्छन । विक्रम सम्वत २०५२ साल देखि आजसम्म मुलुक संक्रमणकालीन बाट चल्दै आइरहेको अवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको कारण मुलुकको स्वाधीनता धरापमा पर्दा पनि सेनाहरुको आस्था दलहरू प्रति मात्र देखिन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा लुटनका लागी गणतन्त्र ल्याइएको हो । आफ्नो कार्यकर्ताहरु, श्रीमती, श्रीमान, छोरा, छोरी, बुहारी आदि आदि जस्ता नाता, गोता, पाल्न र लुटनका लागि संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको हो । तर हाम्रो मुलकका लागि संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली घातक छ । यसकारण प्रदेश सरकारहरु र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
सेनाहरुको लागि मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डता भन्दा ठुलो र प्यारो राजनीतिक दलहरूका नेताहरू होइन र ? कोरोना भाइरसको महामारीमा मुलुकमा संकट परेको बेला मुलुक भन्दा ठुलो सत्ता लिप्सा, सत्ता स्वार्थ र सत्ता परिवर्तनको खेल भइ रहँदा पनि सेनाहरु चुप छन किन ?
सर्वसाधारण हरुलाई मात्र लकडाउन थियो । लकडाउनको समयमा पनि मन्त्रीहरु र नेताहरूलाई खुमलटार, कोटेश्वर, भैसेपाटी र बालुवाटार आदि आदि जस्ता यत्रतत्र जान आउन छुट थियो हैन र ? मन्त्रीहरुलाई मन्त्री परिषद बैठक, सांसदहरू लाई प्रतिनिधि सभा बैठक, स्थायी समिति बैठक र सर्वदलीय बैठक बस्न जान आउन पनि छुट थियो हैन र ?
यसकारण सबै नेपाली नागरिकहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा मुलुक भन्दा ठुलो संविधान होइन । संंविधान फेरि पनि बन्न सक्छ ।
जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर -०२
मोबाइल नम्बर : ९८४८०५५७७६, ९८१२४९१३९७
पछिल्लाे - नमूना नेपालको पोल्यान्ड प्रतिनिधिमा संचारकर्मी महतो नियुक्त
अघिल्लाे - १०४ दिनपछि खुल्यो आइफेल टाबर